Tantaran'ny orinasa - Jiangsu Three Sheep Garden Products Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2014, Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd. tena nanolo-tena hamokatra fitaovana hatsaran-tarehy marani-tsaina, izay mirotsaka amin'ny fikarohana & fampandrosoana, famolavolana, famokarana, marketing ary fivarotana fitaovana hatsaran-tarehy manerana an'izao tontolo izao. Manolotra karazana vokatra manaparitaka isika, anisan'izany ny borosy fanadiovan-tarehy, fikosehana amin'ny hoditry ny tarehy, mpanao saron-tava, borosy makiazy elektrika, fanala mainty sns.
Miaraka amin'ny sampan-draharaha teknika sy laboratoara fitiliana anay, ary koa ny fahaiza-manao matihanina sy ny traikefa famokarana R & D azo, nahatratra mihoatra ny 60 patanty ho an'ny haitao hatsaran-tarehy sy endrika endrika ivelany izahay, dia orinasa haitao avo lenta any Kota Shenzhen. Manana ny birao ao amin'ny 300 metatra toradroa sy ny haben'ny orinasa mihoatra ny 1400 metatra toradroa. Miaraka amin'ny fitsipiky ny iraisam-pirenena, be pitsiny, matihanina ary azo ampiharina, manolotra ny serivisy dragon iray izahay avy amin'ny R&D, fanamboarana hatramin'ny varotra, ary avy amin'ny marika ho an'ny ODM & OEM.
Ny orinasanay dia nametraka rafitra fitantanana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao: ISO 9001: 2015, ary nandalo ny taratasy fanamarinana CCC, CE, ROHS, FCC, PSE sns.
> Fampivoarana ny marika ENIMEI: Mampiroborobo, mampiroborobo ary mivarotra vokatra fikolokoloana sy fikarakarana manokana eto ambany marika manokana, PHILBABY, INAMEX, STA BEAUTYFULL
> Order OEM / ODM / OBM: Omeo marika namboarina sy famolavolana fonosana namboarina, manome lanja ny vokatra voalohany
> Agence marika alalana mpivarotra: Agence marika alalana mpivarotra ho an'ny marika manokana any amin'ny firenena sasany
Ny orinasanay manokana, ny fandefasana azy ara-potoana, ary mametraka fepetra hentitra lalandava amin'ny kalitaon'ny vokatra izahay hamaly ny fitakian'ny mpividy. Ho an'ny entana rehetra, ny fanaraha-maso lalina dia napetraky ny QC anay alohan'ny fandefasana azy. Ho an'ny tamberin'ny mpanjifa tsirairay dia hanaraka akaiky izahay ary hanolotra azy ireo ny vahaolana mahafa-po indrindra.
Mba hampivelarana tsara kokoa ny tsenanay, dia mazoto hatrany izahay mangataka karazana fankatoavana sy marika marimaritra iraisana ho an'ny vokatra lehibe, mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra takiana amin'ny firenena samy hafa.
Ankoatr'izay, mifikitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny varotra varotra iraisam-pirenena isan-karazany izahay mba hahafahantsika mifandray amin'ireo mpanjifanay mifanatrika ary hahafantatra tsara kokoa. Mandritra izany fotoana izany, niditra tao amin'ny sehatra varotra B2B fanta-daza ihany koa izahay ary nampiseho mavitrika ny loharanon-tsainay an-tserasera, mba hahafantaran'ny olona bebe kokoa momba anay.
Mihamalaza hatrany isika noho ny asa sy ny fifantohana. Izahay hatrizay dia natokana ho an'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy hanome vokatra tsara sy serivisy tonga lafatra.